INSTITUT FRANÇAIS DE MADAGASCAR (IFM) | Madatopinfo
INSTITUT FRANÇAIS DE MADAGASCAR (IFM) : Miaina ireo kolontsaina!
Noho izao tonon-taona vaovao 2017 izao, dia tsy nisalasala ny Institut Français de Madagascar (IFM) niantso ireo mpanao gazety, ka nampahafantatra ireo fandaharam-potoana hiseho eo anivony amin’izao telo volana voalohany izao: Janoary sy Febroary ary Marsa.
Mivelatra amin’ny sehatra maro izany hetsika isan-karazany izany. Omena vahana ny tanora amin’ny alàlan’ny vakiteny sy fanentanana samihafa. Manaraka azy eo ny Slam izay sehatra mivelatra. Mibahan-toerana ihany koa ny vela-tseho : Sary Feo maharitra 11 andro ao amin’ny efitrano malalaka fampirantiana. Hisy ihany koa ny atrikasa “numérique Culturthèque” . Izany dia mirazotra amin’ny Atrikasa “JEU C TOUT” lalaon-tsaina “Quizz”. Efa nahafantarana ny IFM hatramin’izay ny fandefasana horonan-tsarimihetsika. Hisantarana izany ny “opéra : Alcina de Heandel”.
Eo hatrany koa ny kaonseritra klasika isaky Alarobia atoandro amin’ny 1 ora isam-bolana : les solistes de l’AEM et Reinhard Schwarte, ho an’izao volana Janoary izao. Hisy ihany koa ny fihaonana amin’ny mpikaroka iray. Haseho amin’ny horonan-tsary ihany koa ilay tantara malaza hoe :”Roméo et Juliette”. Efa zary mahazatra ihany koa ny famelabelarana arahina loa-bary an-dasy. Ka amin’ity dia ny hoe: ” Ny siansa an-tsary, ny sarin’ireo siansa.” Hamarana hy hetsika ny loa-bary an-dasy lehibe mitondra ny lohateny hoe :” Ny alin’ny hevitra 2017!”
Hampiavaka ny volana Febroary ilay hetsika iray :” My french film festival”. Io dia haharitra hadimiana. Eo koa ny “cirque” : Varavarana. Manatombo amin’io ilay velan-tseho :”Exposition Frenche Touch de la Webcreation”, izay haharitra roa herinandro. Hisy famelabelarana momba ny AAENA. Hibahan-toerana ihany koa ny atrikasa hoe :”l’heure numérique”. Ny kaonseritra klasika Alarobia atoandro amin’ity dia hiarahana amin’ny MAESTRIA. Haseho an-tsehatra ilay tantara an-dapihazo malaza hoe: “En attendant dodo!!!” Hamarana ny hetsika Febroary ny Festival Ambony Ambany sy ny Opéra : Don Giovannio.” Ny hetsika isam-bolana dia tsy misy miala fa eo hatrany.
Ho hita mandritra io volana Marsa io ilay velan-tseho lehibe :”Carrot City.” Tafiditra ao anatin’ny 08 Marsa Andron’ny Vehivavy, faha-08 Marsa ny fandefasana ilay horonan-tsarimihetsika hoe : “Des femmes et des hommes”. Halefa anaty horonan-tsarimihetsika ihany koa ilay teatra malaza hoe : Le Misanthrope. Hampiseho ny talentany amin’ny fiangaliana mozika klasika atoandro isam-bolana ihany koa I Adrien Marchand sy Rakotomalala Mireille. Hisongadina ihany koa ny herinandron’ ny teny frantsay sy ny Frankôfônia. Hibahan-toerana amin’io faramparan’ny volana Marsa io ny Fikaonan-doha : “Nourrir la ville” na manome sakafo ny tanàn-dehibe. Ny tontolon’ny dihy no hamarana ny telo volana voalohany 2017 : “Flamenco comptemporain”.